Waldaan Qorannoo Oromoo Kora Isaa Waggaa Gaggeesse
Hagayya 02, 2016
Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA) Kora isaa waggaa xumura torban darbee irra Adooleessa 29-31 bara 2016 tti Waashiington Dii Sii keessa ka jiru Yunivarsitii Hawaard keessatti gaggeessee jira. Waldaan Qorannoo Oromoo eega hundeeffamee barana waggaa 30 kan guute yoo ta’u, kora baranaa kana irratti mata- dureelee adda addaa irratti hayoonni waraqaa qorannoo dhiyeessan akkuma jiran, kanneen biyya irraa dhufanii itti hirmaatan illee jiru.
Waldaan kun jalqaba yeroo hundeeffame seenaa, adaa, jiruu fi jireenya Oromoo kan ilaaleen barreeffamoota sirrii hin ta’iin maxxanfamanii gabaa irra oolan dura dhaabachuun seenaa sirrii kan maalummaa eenyummaa Oromoo calaqqisu ifa gochuuf akka ta’e hayyoonni gameeyyiin ibsanii jiru.
Dhaloonni borii waan jalqabamee kana irratti hirkatee seenaa jiru gara fuula duraatti gama tarkaanfachisuun itti gaafatamnii guddaan akka irra jirus ibsamee jira. Hayyoonni biyyoota alaa keessa jiran kanneen biyya keessa jiran waliin hariiroo jabeeffachuun akka barbaachisus dubbatamee jira.
Marii gaggeeffame guutummaa isaa caqasaa.
Hiriirri Mormii Goondaritti Sambata Darbe Geggeeffame Nagumaan Xumurame
Awadaay Keessatti Mormii Uumame Irratti Lubbuun Namaa Baduu Jiraattonni Dubbatan Poolisiin Garuu Ni Haale
Manni Murtii Ragaa Abbaan Alangaa Yoonaatan Tasfaayee irratti Dhiheesse Barbaachisaa Miti Jedhe
Hidha Laga Abbayyaa Ilaalchisee Waancaan Oromiyaa Keessa Darbaa Jiru Mormiin Isa Mudateera
Hogganaa Kongiresii Federaalawa Oromoo: Harra Addisuu Bullaalaa qofatuu maatiitti gadii bahuu danda’ee
Obbo Beqqelee Garbaa fi Hoogganoonni Mormitootaa Ka Biroon Nyaata Laguu Torban Tokkoof Itti Turan Ammallee Itti Fufan
Oromiyaa Keessatti Hiriirri Mormii Gaggeefame Jedhu Jiraatonni